जनावर र बोटबिरुवा | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: जनावर र बिरुवाहरू
इशारा र जंगली जनावरहरु को मुद्रा को व्यवहार भाषा
प्रकाशित 17.09.2021 17.09.2021
जनावरहरु धेरै स्पष्ट र स्पष्ट बानीहरु, अनुहार को भाव, मुद्रा, आदि द्वारा आफ्नो इरादा देखाउँछन्। एक जनावर को "मूड" को मुख्य संकेत मा एक नजर राखौं
तपाईंको प्रोटीन खुवाउनुहोस्!
प्रकाशित 13.04.2021 13.04.2021
मानव जस्तै, गिलहरीहरूले महामारीमा कठिन समय बिताए - फिडको मात्रा घट्यो, यसले उपनगरी क्षेत्रमा उनीहरूको जनसंख्यालाई असर गर्यो! हाम्रो प्रिय pussies बाँच्न मद्दत गर्नुहोस्!
अचेटिना स्नैकेको हेरविचार र रखरखाव
अफ्रिकी अचातिना घोंघा संसारमा सबैभन्दा ठूलो मोलस्कहरू मध्ये एक हो। यी घोंघाको लम्बाई cm० सेन्टीमिटरसम्म पुग्न सक्दछ। व्यापक वासस्थान उष्णकटिबंधीय जलवायुको देशहरू हो। यदि तपाईंको आफ्नैमा ...
अट्याटिना स्नर्सलाई घरमा राख्दै
बिरालाहरू, कुकुरहरू र साना कृन्तकहरू मनपर्दो पाल्तु जनावर हुन्। तिनीहरू घर र अपार्टमेन्टमा हुर्केका छन्, फेशन ट्रेंडको पर्वाह नगरी। तर फैशन Acatina र अन्य घरपालुवा जनावरमा देखा पर्दछ ...
अचातिना घोंघा - अफ्रिकाबाट एक विदेशी पाल्तु - हेरचाह, प्रजनन, मर्मत
प्रकाशित 28.10.2018 28.10.2018
यदि तपाइँ काममा धेरै समय खर्च गर्न छ, तर एकै समयमा तपाईं वास्तव मा घर मा कम्तिमा केही घरपालुवा जनावर चाहानुहुन्छ। यदि कुकुर राख्नु भनेको "एक अस्वीकार्य लग्जरी" हो, र सबै प्रकारको कृन्तकहरू "ब्यानल" देखिन्छन्। जब तपाईं चाहनुहुन्छ ...
रूसमा उकुलिप्टस कहाँ हुन्छ?
रसियामा मसलाको रूखको वृद्धि कहाँ हुन्छ? के ऊ वास्तवमै यहाँ हुर्किरहेको छ? अष्ट्रेलियामा धेरै छन्। तिनीहरू त्यहाँ बढ्छन्। र यहाँ, यदि त्यहाँ छ भने, त्यसो भए केही बोटानिकल बगैंचामा, यो हुनुपर्दछ ...
के यो बिरालो र बिरालोको घरमा एकै समयमा सम्भव छ?
के बिरालाहरू र चराहरूलाई एकै समयमा घरमा राख्न सकिन्छ? धेरै वर्षसम्म हामीसँग पिंजरा र बिरालोमा क्यानरी थियो। उनले उसलाई चिन्ता पनि गरेकी थिइनन्, तर प्रायः भुइँमा बसिन्।
ककटेलचोकको बाहेक कुन किसिमको कीट अलिकति अपार्टमेन्टमा फ्लोर भित्र जान सक्छ?
अपार्टमेन्टमा काकरोच बाहेक अरू के कीराहरू पनि फ्लोरको भरमा दौडन सक्छन्? त्यहाँ कालो काक्रोचहरू छन्। तिनीहरू सामान्य भृंगुर जस्तो देखिन्छन्, कालो र अलि चम्किला। सामान्य रेडहेड्स विपरीत र ...
फेनके को हो?
Fenech को हो? यो मरुभूमिमा बस्ने एक कानै जनावर हो। गर्मी मा जीवित रहन सक्छ, र शिकार पनि गर्न सक्छन् एक आश्चर्यजनक जनावर। ठूला कानहरू एक प्रकारका लोकेटरहरू हुन् जसले भविष्यको खाजाको साना चालहरू समातिरहेका छन् ...
किन सेतो मशरूम सही सेतो भनिन्छ?
किन सेतो मशरूमको नाम ठीक सेतो थियो? बोलेटस मशरूम सुक्खा पछि पनि यसको हल्का रंगको लागि सेतो भनिन्छ। मशरूम क्यापको तल्लो सतह हल्का रंगको छ, र माथिल्लो खैरो हो। सेतो मशरूम राजा हो ...
किन पार्थिव भइन्छ?
एउटा गँड्यौलालाई किन ब्रस्टल्स चाहिन्छ? गँड्यौलालाई उही उद्देश्यको लागि ब्रिस्टलहरू चाहिन्छ जसको लागि हामी मानिसलाई छाला चाहिन्छ, यो वातावरणको बाह्य प्रभावबाट शरीरको सुरक्षा हो, गँड्यौलाहरूसँग पर्याप्त ब्रस्टलहरू छन् ...
फारसी बिरालोको नाउँ कसरी गर्ने?
फारसी बिरालोको नाम के हो? नाम छनौट गर्दा, केही संघहरू चयन गर्न आवश्यक हुन्छ जुन तपाईंलाई मालिक र तपाईंको पाल्तु जनावरको रूपमा जडान गर्न सक्दछ वा विशेष नाम तोक्न आवश्यक नैतिकताबाट अगाडि बढ्न सक्छ ...
सबै जीवित जीविका को कोशिकाहरु को लागी कुन भागहरु आवश्यक छ?
सबै जीवित जीवहरूको कोशिका लागि कुन भागहरू आवश्यक हुन्छ? जहाँसम्म मलाई स्कूलको पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम याद छ, सेलले केन्द्रक समावेश गर्दछ। केन्द्रक, बदले, DNA समावेश गर्दछ। एउटा झिल्ली झिल्ली भनिन्छ। साइटोप्लाज्म - ...
गायहरू किन सींगहरू चाहिन्छ?
गाईलाई किन सिs चाहिन्छ? मलाई लाग्छ कि सिंगहरू प्रकृतिद्वारा गाईलाई दिइयो, पहिलो, खतरा र शत्रुको अगाडि आफ्नो र आफ्ना प्रियजनको रक्षा गर्न, र दोस्रो, गाईको विकासले सीsहरू दिन सक्दछ ...
किन बिरालो मा सडक मा माउस पकड्छ र यो घर ल्याईन्छ?
किन बिरालोले सडकमा माउस समातेर घर ल्याए? सहज ज्ञान, उनले आफ्ना मालिकलाई बोक्छिन्। त्यो हो, व्यक्ति जसले उसलाई खुवाउँछ। केही डिग्री भक्ति देखाउन ठीक छ। तेसैले…
किन ढोका लामो समयको प्रतीक हो?
नाशपाती किन दीर्घायु को प्रतीक हो? हुनसक्छ, यसले चिनियाँ परम्परालाई जनाउँदछ (नाशपाती लामो आयुका रूखहरू हुन्, १०० बर्ष उमेरसम्म हुर्कन्छ), अन्य देशहरूमा यसको फरक प्रतीकात्मक अर्थ छ। प्राचीन ग्रीसमा, नाशपाती ...
एक फ्याक्स एक व्यक्ति र एक कुकुरले आक्रमण गर्न सक्छ र किन?
के स्यालले मानिस र कुकुरलाई हमला गर्न सक्छ र किन? फ्याक्स स्पष्ट रूपमा रबिड थियो, यो केवल यो थियो कि भाइरस फेला परेन। त्यहाँ कुनै अर्को संस्करण छैन, दुष्ट आत्मा फ्याक्ससमा प्रवेश गर्न सक्दैन ...
किन कुत्ता मिठो हुँदैन?
किन कुकुरले मिठाई खान सक्दैन? मानव जस्तै, मिठाई नकारात्मक तपाईंको कुकुरको दाँत को लागी असर गर्दछ। चिनीले दाँतबाट क्याल्शियम हटाउँदछ, तिनीहरू भंगुर हुन्छन्, र तुरून्त पेट्र्याक्टिभ ब्याक्टेरियाहरूले आफ्नो काम सुरु गर्दछ, विकास गर्दछ ...
फूलको स्थानमा बिरुवाहरूमा के बनाइएको छ?
फूलको ठाउँमा बोटबिरुवामा के हुन्छ? स्वाभाविक - भ्रूण अंडाशय, यदि सफल निषेचन भएको छ। मलाई लाग्दछ कि यी बीजहरू हुन्, (यदि यी उदाहरणका लागि फूलहरू हुन्) भने बीजको साथ बक्सहरू, जुन पकाउन सकिन्छ ...
शौचालयमा उनको पछि लाग्ने एक बिरालो कसरी सिकाउनुहुन्छ?
शौचालयमा उसलाई पछ्याउन बिरालोलाई कसरी प्रशिक्षण गर्ने? म वास्तवमै मेरो बिराला शौचालय जान र आफैं पछि फ्लश गर्न चाहन्छु, तब मैले फोहोरको बक्स सफा गर्नुपर्दैन, ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 249 अर्को पाना
108 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,434 प्रश्नहरू।